Iimpawu, ubuthi kunye nendlela yobomi be-rockfish | Ngeentlanzi
Kwihlabathi lolwandle kunye neelwandle kukho iintlobo ezininzi zeentlanzi zazo zonke iimilo kunye nemibala. Njengoko sisiya phambili emazantsi sifumana iintlanzi ezinedemon ezinje nge Intlanzi fanfi kunye nabanye abaneempawu ezizodwa nezikhethekileyo. Namhlanje siza kukubonisa ubungakanani obukhulu beentlanzi ezithile ukudibanisa nokusingqongileyo kwaye ufumane okuninzi kulo. Sithetha ngerockfish. Igama layo lenzululwazi ngu I-Synanceia horrida kwaye yintlanzi ekuthiwa lula ngamatye aselwandle.
Kweli nqaku siza kukuxelela yonke into malunga nale ntlanzi, ukusuka kwinto eyityayo kunye neempawu zayo eziphambili ukuya ekuzingeleni ixhoba lalo kwaye luhlobo luni lokuvelisa kwakhona. Ngaba uyafuna ukufunda okungakumbi ngale ntlanzi inomdla? Kufuneka uqhubeke ufunda 🙂
1 I-Rockfish ekwaziyo ukufihla kwimeko yolwandle
2 Ityhefu kunye nobukhulu
3 Indawo yokuhlala yaseRockfish kunye nemibala
4 Ukulungelelaniswa kunye nobuchule bokulinganisa
5 Ukondla nokuzala
I-Rockfish ekwaziyo ukufihla kwimeko yolwandle
Ukuze usifumane ngcono kwi-odolo yakho kunye nosapho siza kuthi yeyakhe iTetraodontiformes kunye nosapho lakwaSinancéido. Ukuze ibambe ixhoba layo, isebenzisa ukubonakala kwayo okwahlukileyo kwamatye ukudibanisa amaxhoba kunye nokuhlasela ngetyhefu abanayo. Ukuluma kwayo kunamandla kangangokuba kuyabulala nasiphi na isilwanyana esilumkileyo.
Ikwachaphazela nabantu, njengoko behlala besondela kwimimandla eselunxwemeni apho uninzi lwabahlambi lukhoyo. Ngokuphazanyiswa lula lilitye, kunokwenzeka kakhulu ukuba ekugqibeleni sinyathele kulo kwaye siphele sityhefu. Ziintlanzi ezifumaneka ngokubanzi ezinzulwini zolwandle.
Ukusukela ekubeni umntu enziwe kwimbali engaphambi kokuzalwa komzingeli ejongene nazo zonke iintlobo zeentlanzi zeentlobo ezahlukeneyo. Zombini ezi ndidi zinobuhle obungenakubalwa, nezinye ezihlasela zingaphazanyiswa okanye zihlaselwe. Le yimeko ye-rockfish.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, I-rockfish ihlala ifumaneka kubunzulu bolwandle kwaye ibekwe apho kukho amatye apho inokuthi iye ingabonwa. Iqwalaselwa njengodidi lweentlanzi ezingaqhelekanga ezinikezwe kunqabile kunye nokubonakala kwazo kunzima. Eyona nto iqhelekileyo kukuba siyalunywa yile ntlanzi ngenxa yengozi yokudibana. Singaqondanga siyayinyathela kwaye iintlanzi ziya kusiluma. Nangona ikwazi ukuzifihla, yinto elula kwezinye iintlobo ezinje ii-stingrays, imikhomo kunye nookrebe abamhlophe.
Nangona uninzi lwezilwanyana ezifihliweyo kucingelwa ukuba zingaphila ngcono kwindawo ezinobunzima, zonke iintlobo zezilwanyana zinamarhamncwa azo.
Kukho iintlobo ezingaphezu kwe-XNUMX zeentlanzi ezinetyhefu, enobuhlungu obungaphezulu kobo benyoka, kwaye i-rockfish ikwelo qela lineyona inetyhefu.
Ityhefu kunye nobukhulu
Njengoko iyintlanzi enetyhefu, kubalulekile ukuba uthethe ngayo kunye neziphumo ezinokubangelwa kukulunywa. Elona candelo liyingozi kule ntlanzi kukuphela komqolo. Kwaye yenziwe ngameva ali-13 apho igcina khona le tyhefu inamandla. Esi sigqibo sithathwa njengesixhobo sakho sokuzikhusela kwiimeko ezibi. Ukutyhefa ixhoba layo, lihlaba ngomphetho wasemqolo kwaye lazise ityhefu ngezihlunu ngendlela ekhawulezileyo nelinganayo.
Ubuhlungu obuqulathe ii-cytotoxins ezininzi kunye nee-neurotoxins ezenza ityhefu unamandla ngaphezu kwemfezi. Iziphumo zalo zikhawuleza. Okokuqala, ibangela ukudumba okukhulu, njengoko ityhefu isasazeka emzimbeni nakwizicubu zomzimba. Ichaphazela izihlunu ngokungathí sina, izikhubaze ngokukhawuleza kwaye ibangele ukuwa okunamandla, ukuba indlela yothintelo okanye inkqubo yoncedo lokuqala ayithathiwanga, inokukhokelela ekufeni kwiiyure ezimbini.
Into eyenza le ntlanzi ibe luphawu lwayo ubukhulu bayo kuxhomekeke kwityhefu yayo. Eyona nto iqhelekileyo kukuba ezona ntlanzi zincinci zifuna uhlobo oluthile lwetyhefu ukuzikhusela kwizilwanyana ezizingelayo. Nangona kunjalo, le ntlanzi, ngaphandle kobukhulu bayo obukhulu, nayo inetyhefu eyingozi. Ziziisentimitha ezingama-35 ubude, nangona sele ifunyenwe ezinye iisampulu ezifikelela kwi-60 cm. Ukuba le ntlanzi ikhula kwindawo yayo yendalo iya kufikelela kubude obukhulu.
Kuyenzeka ukuba ubenazo kwi-aquarium, kodwa ziya kufikelela kwiisentimitha ezingama-25 kuphela. Abanye baya kucinga ukuba ukuba nentlanzi enetyhefu kwitanki leentlanzi kunokuba yingozi kwaye ngakumbi ukuba kukho abantwana ekhaya. Akukho nto inokukhathaza ngayo, njengoko ezi ntlanzi zingayi kuhlasela ngaphandle kokuba ziphazanyisiwe.
Indawo yokuhlala yaseRockfish kunye nemibala
Indawo yayo ephambili yokuhambisa igubungela iindawo ze EMantla e-Australia kunye nommandla we-Indo-Pacific. Ngaphandle kwetyhefu enamandla, ayithathwa njengesongelo kuba ayihlaseli ngaphandle kokuba iphazamisekile okanye ihlaselwe.
Sifumana i-rockfish eneentlobo ezahlukeneyo zemibala ukusuka kobomvu ukuya ngwevu, ngatyheli, luhlaza, mhlophe nangantsundu. Kuwo wonke umzimba wayo wonke, wenza umahluko wale mibala kwaye kwenziwa umxube owahlula ngamnye kwitoni eyahlukileyo neyahlukileyo.
Ukulungelelaniswa kunye nobuchule bokulinganisa
Ukufana ngokusondeleyo nelitye, ineeprosesions ezilinganisa uburhabaxa bazo kwaye ngenxa yoko zinokudideka ngokulula. Inentloko ethe tyaba kwaye iphela ngomlomo omileyo. Amehlo abo mancinci kwaye aqhubeka ngaphezulu kwentloko. Enkosi koku, Bayakwazi ukumamela nayiphi na ingozi.
Kuwo wonke umzimba wayo uneentsholongwane ezahlukeneyo kunye neeminerals ukusuka kwinani elikhulu lezityalo kunye nobulembu. Ukongeza, iqhuba emzimbeni wayo ulwelo olunamathelayo oludibene nencindi. Le ncindi isetyenziswa zizityalo, iikorale, ulwelwe kunye neentsholongwane zokunamathela kuyo kunye nokwamkela ubume bamatye obungcono.
Bahlala ngokubanzi phakathi kweminyaka eli-10 ukuya kweli-12.
Itya ezinye iintlanzi, ezinye ii-crustaceans, iimollusk kunye ne-shrimp. Ukutya kwabo kukutya ngokupheleleyo. Isebenza ngakumbi ebusuku, ke ibekelwe ukuzingela ngaloo maxesha. Emini akaphumi kwindawo yakhe ekhuselekileyo kufutshane namatye apho anokudlula khona.
Ngokumalunga nokuzala kwayo, ezona nyanga zinemveliso ngoFebruwari nangoMatshi. Imazi ibeka amaqanda ngaphezulu kwemingxunya ematyeni. Iinkunzi zinoxanduva lokukhusela amaqanda ngelixa ziqandusela. Banamandla kwaye banobundlobongela ngaphezu kwabasetyhini.
Ndiyathemba ukuba uza kuyazi ngcono i-rockfish ngolu lwazi kwaye ulumke ungabanyatheli
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Iintlanzi zeliwa